Ezempilo, Izithako namavithamini
Ngamunye wethu empilweni kunezimo lapho, ngokubambisana, kudala izikhathi eziningana zokuphazamiseka kwemizwelo nokukhathala ngokomzimba. Isimo sethu ngezikhathi ezinjalo akufanele sithandwe, futhi akulula izihlobo. Ukukhungatheka okuqhubekayo ngezinto ezincane, ukungabi namandla nokufisa ukwenza noma yini, ikhanda nokulala okubi, inkathazo ngokuphefumula, i-arrhythmia ingengxenye encane yemiphumela yokungalindeleki komzimba womuntu kanye nesignali esinamandla ukuthi sekuyisikhathi sokuthatha impilo yakho siqu. Ngokusemthethweni, isizathu salesi simo sinokubili: ngakolunye uhlangothi, kwengqondo (ukucindezeleka, izinzwa), ngakolunye uhlangothi - ezomzimba (ukungabi namavithamini, ukukhululeka ngokomzimba). Ngakho-ke, kubalulekile ukulwa nale nkinga ngendlela eyinkimbinkimbi. Uma ucabangela ukubuyekezwa okuningi, "Berrocca" kuyithuluzi elinzima kangaka. Ukubunjwa nokusebenza kwayo emzimbeni, sizohlaziya kulesi sihloko, futhi sicabangele imibono yabodokotela ngokufaneleka nokusebenza kwalesi sidakamizwa.
Imithi "Berokka": incazelo ejwayelekile
Leli khambi liyinkimbinkimbi yamavithamini namaminerali okudingekayo ukugcwalisa izinto ezibaluleke kakhulu empilweni yengqondo nokuzivikela okuhle. Ngakho ukusho, iphilisi esuka emithanjeni ene-side effect effect. Isidakamizwa senzelwe ukujwayela okuqukethwe komzimba wamavithamini B no-C, kanye nokugcwalisa ukwaneleka kwamaminerali abalulekile - i-calcium ne-magnesium.
Isakhiwo esiyinkimbinkimbi sikhiqizwa ngezindlela ezimbili: yivithamini ye- effervescent "Berokka", engatholakala njalo, futhi amaphilisi aqoshiwe, "i-Berokka plus." Lezi zimali zihloswe ekuxazululeni inkinga eyodwa futhi zibe nokubunjwa okufanayo kakhulu, kodwa kukhona ukungafani okuphawulekayo. Ezinhliziyweni zombili, kunevithamini B (1, 2, 6 no 12), C, magnesium ne-calcium, i- pantothenic acid, i- biotin ne-nicotinamide. Nokho, amaphilisi egobolondo nawo ahlanganiswa ne-zinc ne-folic acid, kuyilapho i- vitamin C iqukethe ingxenye yawo. Ukukhetha ithuluzi elithile kuxhomeke emigomweni yakho yokugcina. Uma ucabangela ukufakaza kwezokwelapha, "i-Berroca Plus" ihloselwe ukwelashwa okuphelele futhi ibonakala ngesenzo eside, kuyilapho ifomu le-vitamin eline-effervescent linomthelela olinganiselwe kodwa wesikhashana.
"Berroca" ikhambi: isenzo emzimbeni
Njengomthetho, lesi sidakamizwa sithengwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi ingculazi namavithamini emzimbeni, ikakhulukazi entwasahlobo. Ikhishwa ngaphandle kwemithi kadokotela, abaningi bayayibeka ngokwakho noma ngeseluleko se-apothecary. Kodwa-ke, isixazululo salezi zinkinga kuphela yisiphambano se-iceberg, futhi isisekelo sokwamukelwa ngokuqondile ngokubuyiselwa kwempilo yengqondo, ukuqeda ukucindezeleka nokucindezeleka kwesikhathi eside. Ngenxa yalezi zinhloso, izidakamizwa zivame ukubekwa odokotela ngokwabo, zikhomba ukusebenza kwayo ngokuphumelelayo ngendlela enembile emzimbeni womuntu.
Kuyini ubuqotho benkimbinkimbi yaseBerokka? Ukuphawula kodokotela kuncike ekuqaphelisweni kweziguli zabo ezithatha le remedy futhi zibonisa ukuthi zingasebenza ngempela. Kakade ngemva kwamasonto amabili ukudla njalo amaphilisi e-effervescent, eziningi zazo zabonisa ukuthuthukiswa okuphawulekayo: izinga lezamandla landa, ubuthakathaka nokukhathala okuhlala njalo kuncike. Iziguli eziningi zancoma kakhulu i-Berroca ikhambi lokuqeda ukulala nokunciphisa usuku lonke. Ezinye zalezi zimo, njengokunganaki, ukuphazamiseka kokulala, ukukhathazeka, kubangelwa ukungabi namandla kwe-magnesium emzimbeni. Isidakamizwa esithi "i-Berokka" iqukethe lesi sici ngemali eyanele yokwandisa ezingeni elidingekile (100 mg). Futhi ngokuhambisana nezinye izinto, umphumela wayo wanda kuphela.
Ngaphezu kwalokho, i-vitamin-mineral complex iyakwazi ngokushesha (amathebulethi ikakhulukazi ama-effervescent) ukugcwalisa ukungabi nalutho kwezici ezidingekayo, okubangelwa ukudla okunomsoco, ama-antibiotics, ngisho ne-chemotherapy. Kuzosiza futhi ekubuyiseni ngemuva kokuqeda utshwala nokubheja komzimba we-nicotine, okusiza ukubuyisela umzimba empilweni egcwele.
Umphumela wokusetshenziswa kwamavithamini "Berokka"
Lezi zinkimbinkimbi zenzelwe ukwelashwa okuyinkimbinkimbi yesikhathi esifushane, okumele kwenziwe okungenani kabili ngonyaka (noma kunesidingo). Okokuqala, ungathatha isonto le "vitaminisation", ukuthenga amaphilisi e-effervescent "Berokka." Baqhekeka kalula emanzini, kanti isiphuzo esiphumela sinomnandi omuhle we-orange. Ungamangali uma umphumela wamavithamini uzozizwa cishe ngaso leso sikhathi. Ngokushesha bavuselela umzimba, kungani sebenzisa odokotela amaphilisi batusa ekuseni (ukukhokhwa kwe-vivacity ngosuku olunikezile). Kodwa-ke, lesi senzo siphila isikhathi esifushane, kanti umphumela wokuthatha amavithamini uyanyamalala masinyane emva kokuphela kwenkambo (uma sikhuluma ngesenzo esithile esibikiwe).
Amaphilisi afakwe: izici
Umphumela ohlala njalo futhi ozinzile uyinkimbinkimbi yeBerokka Plus. Izimpendulo zalabo abamukelayo zifakazela ukuthi izidakamizwa zibuyisela isimiso sezinzwa esiphelile, amandla (kubandakanya umzimba) avele, futhi inhlalakahle ithuthuka kakhulu. Inkambo ihlala izinsuku ezingu-30, futhi umphumela isikhathi eside kakhulu. Ake sibone ukuthi lawa mavithamini akwazi ukulandelana nodokotela:
Ukugqugquzela ukugaya umzimba emathisini (ukwesaba kanye nemisipha);
Thuthukisa umsebenzi wesistimu yezinzwa, unikeze izimo ezihle zokudluliselwa kwemizwa yezinzwa emisipha;
Nciphisa ukungezwani kwesifo, ukucasula;
Usizo ngokulala, ukukhathala nokukhathala okungapheli.
Konke lokhu kungenzeka ngenxa yokugcwalisa izinto ezingekho emzimbeni, kufaka phakathi amaminerali abalulekile, awanikeza ngamavithamini aphelele "Berokka." Ukubuyekezwa kuningi kokubili kubachwepheshe kanye neziguli, ngakho-ke banokwethenjelwa.
Ukungafani kokuthatha izidakamizwa nemiphumela yaso emibi
Njengoba usuqaphele kakade, odokotela baqotho kulo muthi. Akumangalisi, ngoba kuphumelela ngisho noma kungabi umkhiqizo wokwelapha. Lawa amavithamini, anethonya ngokucophelela futhi avuselele umzimba. Noma kunjalo, akufanele kuthathwe kalula. Odokotela batusa ngokuqinile ukuthi baqale ukuhlolwa futhi bathole iseluleko esivela kuchwepheshe bese bebuyela ekwamukeleni kwalokhu okuyinkimbinkimbi. Ngokusho kwabo, umphumela wezenzo ezingacatshangelwayo kungaba yimiphumela engathandeki kakhulu. Lezi yizifo zokugaya ukudla, ukubukeka kwemisipha kanye ne-urticaria, kanye nokuvuvukala kwe-larynx. Akukhipha futhi i- hemolytic anemia uma kunesifo se-glucose-6-phosphate dehydrogenase.
Ngaphezu kwalokho, odokotela banikeza izixwayiso mayelana nokusetshenziswa kwezidakamizwa. "I-Berrock" ayinqatshelwe ukungena uma kunezinkinga ezilandelayo:
Ukukhubazeka kwama-Renal, urolithiasis;
Ukwandisa i-calcium noma i-magnesium emzimbeni;
Ukuziphendulela kwezinto eziyingxenye yomuthi.
Izifo zamathumbu, ama-pancreas, i-gastritis nezinye izinkinga zezempilo ziyisizathu sokusebenzisa ngokucophelela ukwelashwa. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ukukhululwa kwalezi zinkimbinkimbi zamaminerali ezinkimbinkimbi ngaphandle kwemithi kungakwazi ukudlala ngokuvumelana neziguli ezithile zifundela ngokucophelela imiyalelo esiyidakamizwa. Ngakho-ke, into yokuqala kufanele uqhubeke uthintana nodokotela.
Kusukela kulesi sihloko ufunde ukubunjwa nenhloso ye-vitamin-amaminerali ethandwa kakhulu namuhla, izici zesenzo sayo nokusebenza, njengoba kuboniswe ukubuyekezwa okuningi. "I-Berroca" ingathuthukisa kakhulu impilo yakho, ikakhulukazi ngezikhathi zokucindezeleka isikhathi eside nokusebenza ngokweqile. Kodwa-ke, ukuthatha amavithamini, njengoba odokotela bathi, kufanele kwenziwe ngokucophelela futhi mhlawumbe ngemuva kokuhlolwa.
I-Orlix (umkhiqizo): imiyalo nezincomo
Amavithamini "i-Supradin": ama-analogues nama-substitutes, imiyalelo yokusetshenziswa
"I-Motherland Izingcingo" - poster obiza umzabalazo wokulwa abahlaseli
Indlela ukuhalalisela abangani abangane bakhe